We.com.mm - တုပ်ကွေးအမြန်ပျောက်ဖို့ စားရမယ့် အစားအသောက် ၅ မျိုး
အခုရာသီမှာ အတော်များများ တုပ်ကွေးဖြစ်တတ်ကြတာမို့ တုပ်ကွေးအမြန်ဆုံးသက်သာဖို့ စားရမဲ့အစားအသောက် ၅မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူမှာပါတဲ့ allicin လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်ပိုးကြောင့်ဖျားနာမှုတွေကို ကောင်းကောင်းတိုက်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဒီတိုင်းစားရမှာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကြက်ဥကြော်ထဲ ထည့်ကြော်စားတာမျိုး ဒာမှမဟုတ် စွပ်ပြုတ်ထဲထည့်သောက်တာမျိုးတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဟင်းနုနွယ်အပါအဝင် အခြားအစိမ်းရင့်ရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ ဆရာကြီးတွေပါပဲ။ အဖျားမြန်မြန်ပျောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေမှဖြစ်မှာပါ။
ဂျင်ဆင်းကလည်း တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဓာတ်စာတစ်မျိုးပါပဲ။ ဂျင်ဆင်းဟာ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေရုံသာမက ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်တဲ့အတွက် ရှေးယခင်တည်းကနေ ယနေ့တိုင် နာမည်ကြီးလျက်ရှိနေတာပါ။ ဂျင်ဆင်းကို အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ ရေနွေးနဲ့ စိမ်သောက်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ဂျင်ဆင်းအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ ဖြည့်စွက်စာ supplement တွေအနေနဲ့ မှီဝဲလို့ရပါတယ်။
Vitamin C က တုပ်ကွေးဖြစ်နေချိန်မှာ တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခါ လိမ္မော်သီးကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ စတော်ဘယ်ရီဟာ လိမ္မော်သီးထက်တောင်မှ ဗီတာမင်စီ ပိုပြီးကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကို အဓိကတိုက်ထုတ်ပေးမဲ့ ဗီတာမင်စီဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အလိုအလျောက်မထုတ်နိုင်တဲ့အတွက် တုပ်ကွေးဖြစ်နေချိန်မှာ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့အသီးအနှံတွေကို စားပေးသင့်တာပါ။ အသင့်လျော်ဆုံးကတော့ စတော်ဘယ်ရီဖြစ်ပါသတဲ့။
တုပ်ကွေးဖြစ်နေချိန်မှာ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ဓာတ်စာပါပဲ။ ကြက်စွပ်ပြုတ်ပူပူလေးတစ်ပွဲက သင့်ကို ခွန်အားဖြစ်စေရုံသာမက ရေဓာတ်ကိုပါဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး တုပ်ကွေးကြောင့် လည်ပင်းနာတာတွေ ပါးစပ်ပျက်တာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
ဖျားနာခြင်းကင်းပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ. . .
ဗီတာမင်အားဆေးတွေကို နေ့စဉ် သောက်သုံးသင့်ပါသလား ?
Christmas အချိန်အခါနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အနီရောင် Sandwich ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်
အိမ်မှာဆီထမင်း လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်စားမယ်